Odoyaasha soo xulaya Baarlamaanka labaad ee Koofur Galbeed oo maanta la Xareynayo. - Awdinle Online
Odoyaasha soo xulaya Baarlamaanka labaad ee Koofur Galbeed oo maanta la Xareynayo.
Guddiga Farsamada ee loo xil saaray diyaarinta Odoyaasha dhaqanka Beelaha ee soo xulaya Baarlamaanka ayaa sheegay in maanta ay guda-galayaan mid kamid ah howlaha ugu muhiimsan ee lagu diyaarinayo Xildhibaanada Cusub.
Waxa ay intaa ku dareen in ay raacayaan Habraacii ay shalay soo saareen eek u saabsan Xulista Baarlamaanka labaad ee DKGS oo tiro ahaan ka yaaranaya Baarlamaanka 1-aad ee waqtigiisu idlaaday.
Guddiga ayaa Odoyaasha siiyay Tababar kooban oo quseeya habka xulista Baarlamaanka, si ay ugu fogaadaan eex iyo nin jecleysi sida xubnaha Guddiga ay sheegeen.
Magaalada Baydhabo waxaa ku sugan Odoyaasha dhaqanka ee Beelaha kuraasta Baarlamaanka ku leh DKGS, si ay usoo dhisaan Xubnaha Laanta Xeer dejinta, waxaana dhanka kale Ol-ole Xooggan oo ay wadaan Xubnaha Xildoonka ah.
Odoyaasha dhaqanka qaarkood oo la hadlay Awdinle.com waxa ay sheegeen in Shaqsiyaadka Xildoonka ah ay ku kala xulanayaan kaalinta uu ku dhex leeyahay beeshiisa, si Xildhibaanka uu noqdo mid ay la xisaabtami karaan dadka uu matalo.
Madaxweynaha DKGS Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen ayaa dhawaan sheegay in lasoo gaba-gabeynayo soo xulista Baarlamaanka labaad, waxaana Odoyaasha Beelaha uu ka dalbaday in aysan soo xulin Xildhibaanno badan.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland Oo Kulamo la qaatay odayaasha deeganka Dhoobley:- (Sawiro).
Next articleXarumo ku yaalla Caabudwaaq oo la wareegay Ciidamo careysan